Foreigners can contact the nearest Myanmar embassy for visa exception
Myanmar has suspended all types of visas and visa exemption services on March 28 and now has extended the entry restriction measures until June 1 to continue its effective response measures to reduce the importation and spread of the COVID-19. However, in case of urgent official missions or compelling reasons,...
Impeachment fails; Yangon Cheif’s position remains unchallenged
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The opposition at Yangon Regional Parliament submittedamotion to the Yangon Regional Parliament to impeach U Phyo Min Thein, Chief Minister of Yangon. But it was rejected withamajority of the vote-77 against 25 votes at the emergency parliament session called to hear the case...
English Text Below အထည်ချုပ်လုပ်သားများအတွက် ထောက်ပံ့ပေးမည့် ရန်ပုံငွေကို မေလ ၁ရက်မှစတင်၍ အလုပ်သမားထံသို့ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဉရောပသမဂ္ဂ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ပထမအသုတ်အဖြစ် ငွေလွှဲပြောင်းထောက်ပံ့မှုကို ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လအတွင်း ဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည့် စက်ရုံခြောက်ရုံမှ အလုပ်သမားများကို စတင်ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အလုပ်သမား ၉၀၀၀၀ခန့်ထံသို့ လွှဲပြောင်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။ “အလုပ်သမားတွေ ခက်ခဲရုန်းကန်နေရတဲ့ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ မြန်ကူအစီအစဉ်ကနေတစ်ဆင့် အီးယူကပေးတဲ့ အထောက်အပံ့တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အီးယူနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု အလုပ်သမား၊လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်...